tabaha – Tailoress The
Isticmaal hab this of galinta siibadaha si loogu isticmaalo at necklines, Xarunta oo hore Dhabarkooda on dushooda iyo dharka. zip waxaa si toos ah kooxda kaalinta on a tollayn-line oo ka muuqan doona qayb ka qarinaayay markii dhamaystiran. Machine baste furitaanka zip ee dhar iyo saxaafadda furan. Iyadoo zip la xiray, gelisaan weheliyaan line kama tollayn ah, iyo […]
Budhadhkuna qaabka aad dhar iyo xoojiso muuqaalada ee jirka, sida isku dhaceen, dhexda iyo dib-bartamaha. Iyadoo ku xiran qaab aad dhar aad yeelan karaan iyaga ku dhow yahay inuu jidhka ama dabacsan habboon in jidhka suurawdo. Si kastaba ha ahaatee, waxay kaa caawin jeedin gabal guri dhar qaab dhar habboon. […]
September 21, 2017 | No Comments | Seams, tabaha, Talooyin
Dabbaasha Dhismaha Habka
April 11, 2015 | No Comments | tabaha
Dabbaasha Dhismaha Habka Sidee loo tolo salsaarasho. Isticmaal lala block ee dabbaasha, oo aad qabyada karaa iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah laba buug oo ka hooseeya. Create aad hannaankii oo ka gooyay laba qaybood waxaa ka mid ah, iyadoo la isticmaalayo midabka la mid ah ama midabyo kala duwan. Habkani soo saarta salsaarasho karo, qarinta dhan dun. [xyz-ihs jajabka =”dhar-samaynta buugaagta”] Swimwear is […]
Lingerie Dhismaha Habka
Lingerie Dhismaha Habka Tani waa habka ugu fiican ee aan helin ilaa hadda, Waxaan rajeynayaa in ay u shaqayso idiin aad! Kuwan waxaa inta badan abuuray oo isticmaalaya harqaan ah, ma gacan-tolo sida ay ka badan raagaya waa. Oo wuxuu ku yidhi in, aad rabto in ay ku daraan qaar shalash jilicsan ama appliqué, gacanta lagu tolo noqon lahaa ugu habboon. waxaan […]
Surwaal Dhismaha Habka
Surwaal Dhismaha Habka farsamooyinka qaarkood waa in aad aqoon u leh ka hor-upka: tailors tacks basting bar tack slip stitch catch stitch fell stitch hem stitch continuous speed tailors tack pockets You will need to draft a trouser block. I suggest using one of the below books to do this: [xyz-ihs jajabka =”dhar-samaynta buugaagta”] Also take the time […]
Dharka Dhismaha Habka
Dharka Dhismaha Habka Sidee loo tolo dharka. this Isticmaal isagoo ah hanuuniye. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli waxaa lagama maarmaan ah in la qabsado ama bedeli taxanaha, laakiin tani waa heer, Jidka toosan weeraryahan ay si wadajir ah u saaray dharka a. Farsamooyinka qaarkood waa in aad aqoon u leh ka hor inta aanad bilaabin: back stitch blind stitch catch stitch even basting fell […]
Loogu talo galay jaakada Habka Dhismaha
Jaakada loogu talo galay Dhismaha Habka Sidee loo tolo jaakad ama jaakad. Waxaa jira marxalado badan oo tagaan abuuraya jaakad ama jaakad. Waa Cunidda waqti iyo fiddly! Laakiin sidoo kale qiimo-halka. Waxaad u baahan doontaa in ay qoraan ama jaakada jaakad block a ekaada. I suggest using one of the following books to do this; [xyz-ihs […]
Sida loo qaado Qiyaasaha Body
Sida loo qaato cabirka jirka. Haddii aad qorshaynayso in la sameeyo dhar naftaada adiga oo isticmaaleya isticmaale cabbirka shakhsiyeed, waxaa muhiim ah in qof kale aad ku qiyaastaan. Waa wax aan macquul aheyn haddii kale oo aad halis u ah qaadashada cabbir sax ahayn taasoo keeni doonta in aad la abuuro wax aan ku haboonayn. When taking measurements for […]